Kiiska - Goodao Technology Co., Ltd.
Budada Titanium ee loogu talagalay daro Titanium, Ti
* HX Fursada
HX waxay ku abuuri lahayd sumadda birta budada gudaha muddo 3 sano ah. HX waxay go'aansatay inay wax ka qabato "daacadda iyo kalsoonida, is-edbinta iyo u heellanaanta bulshada, iyo hal-abuurka" si loo bixiyo oo loo bixiyo tayo wanaagsan iyo adeeg loogu talagalay waxqabadka wanaagsan ee tayada, tayada wanaagsan ee qalabka biraha.
* Taariikhda HX
Abriil 2012, HX ayaa la aasaasay.
Bishii Juun 2012, HX waxay qaadataa laba bilood si ay u soo saarto budada gaaska hoose ee chromium ee badan, heerka nijaasta ayaa ka hor tagi kara heerka ku dhow alaabta ceyriinka ah si loo buuxiyo shuruudaha macaamiisha ku jira bartilmaameedka ugu dambeeya iyo warshadaha lagu buufiyo plasma.
Oktoobar 2012, HX waxay soo bandhigtay qalabka faakiyuumka oo horumarsan rakibiddiisana waa lagu guuleystay, si loo soo saaro daawaha heerkulka sare, helitaanka iyo iskudhafka taxanaha noocyada kala duwan.
Febraayo 2013, hal-abuurnimo farsamo, Ti budada Tijaabinta habka maching ayaa bedeshay budada hydrogenation, waxay badbaadin kartaa in ka badan RMB 7K / ton iyo
tayada waxay gaari kartaa heerka lagu daro.
Meey 2013, Awoodda budada titanium-ka waxay gaartey 50 tan bishii bishii qaybteeda suuquna si tartiib tartiib ah ayey usii kordheysaa.
Oktoobar 2013, foornada Nitriding iyo foornada sintering ayaa si guul leh loo dhex dhigay, saamiga saamiga suuqa ee nitride iyo alaabooyinka taxanaha carbide ayaa si dhakhso leh u qabsadey suuqa gudaha, si xoog lehna ugu xoojiyay sumadda HX suuqa gudaha.
Maarso 2014, Waxay soo bandhigtay qalabka faaruqa ah iyo farsamaynta farsamada si loo soo saaro budada zirconium codsi ka yimid shirkadda militariga,
si loo soo saaro budada zirconium ee wakiilka gubida milatariga iyo budada wax soo saarka caadiga ah.
Oktoobar 2014, taxanaha Boride iyo silsiladaha isku dhafan ee silsiladaha ah ayaa si guul leh R & D loo soo saaray si madaxbanaan.
Maajo 2015, kiniiniyada-yar-yar ee Ti iyo Cr ayaa guud ahaan la soo saaray.
Oktoobar 2015, Maareynta ugu sarreysa waxay go'aamisay inay xoojiso oo ay soo bandhigto hibooyin farsamo oo heer sare ah si ay u hagto horumarka hawlgalka HXs.
Diisambar 2015 technology Tikniyoolajiyadda wax soo saarka budada Titanium ee lagu daro ee sii kordheysa ee tayada sare u kacsan ayaa gaartay heerka heerka sare ee caalamiga.
Awoodda ayaa gaartay joog cusub.
Juunyo 2016, Waxaan diirada saareynaa sahaminta suuqyada overs Tiro badeecooyin ah oo macaamiisha ay bilaabaan inay isku dayaan. HX ayaa lagu yaqaanay macaamiisha shisheeye.